I-Wind Generator-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Sakha uchungechunge lwama-rotor amasha aphezulu asebenza kahle, ama-disc-shape, i-rotor yangaphakathi (yangaphandle), isigaba sesithathu, i-Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) ene-stator.AFPMG engenasisekelo futhi eyonga kakhulu ukusebenza nge-ngqo-drive turbine yomoya encane (i-SWT) kanye nabakhiqizi be-Hydro Power.AFPMG bahlinzeka ngezinsizakalo ngokuya ngosayizi nokubukeka. Isakhiwo somqondo we-AFPMG silula, futhi umqondo wokuqhafaza onesakhiwo se-stator unikeza u-generator ukusebenza okuhle nokusebenza kahle kakhulu.
Ukusebenza kahle kakhulu ngejubane eliphansi
Akukho ukulahleka kokushayela kwemishini, akukho ukulahleka kwe-rotor yethusi ngenxa yokuphuma okuphelele kobuthi futhi akukho stator eddy yokulahleka kwamanje ku-stator engenazimbi (engenantambo)
Ukusebenza kahle kwe-AFPMG, kuya ngemodeli, kufinyelela ku-90%.
Ubukhulu obuncane nesisindo
I-AFPMG ihlukile futhi ayinasisekelo, ukwakhiwa kulula. Ama-generator asebenzisa insimbi encane kakhulu ekwakhiweni kwawo, kuyilapho ihlala isikhathi eside kakhulu futhi inempilo ende.
Isikhundla esiphakeme (umthamo wokukhipha ngesisindo seyunithi ngalinye) siphumelela kakhulu kunalabo abavela kubakhiqizi abaqhudelanayo. Lokhu kusho ukuthi ngobukhulu obufanayo nesisindo.
Izindleko ezincane kakhulu zokulungisa
I-AFPMG yi-drive eqondile, ayikho i-gearbox, uhlelo lwamahhala lwamafutha, ukukhuphuka kwezinga lokushisa eliphansi
Ukusebenza kwamandla okuphezulu kakhulu ngesivinini esiphansi embonini kusho ukuthi abakhiqizi bangasekela noma yiluphi uhlobo lwenjini yomoya enejubane elikhulu lomoya.
Ukusetshenziswa komoya okupholisa kunciphisa izindleko zokulungiswa futhi kuqinisa kakhulu ukuzimela kwamayunithi kagesi.
I-torque ephansi kakhulu
I-AFPMG ayinayo i-torque evuthayo ne-torque ripple, ngakho-ke i-torque yokuqala iphansi kakhulu, ngoba i-turbine encane yomoya eqondile (drive-drive) omncane, ijubane lomoya eliqala lingaphansi kwe-1m / s.
Umsindo ophansi kakhulu, ukudlidliza okuncane, alikho ibhande elisebenza ngomshini, igiya noma iyunithi yokuthambisa, impilo ende
Ubuchwepheshe obuyi-100% bokuhlanzeka kwemvelo nezinto ezisetshenziselwa ukukhiqiza ngesikhathi sokusebenza kwempilo ende nokuvuselelwa kwesikhathi esizayo akunangozi ngokuphelele emvelweni.
· Izicelo Main
Ama-generator amancane omoya (i-SWT)
Ama-generator amancane kagesi aqhutshwa izinjini zikaphethiloli noma udizili,
Imishini yokushayela kagesi yemoto kagesi, njenge-motor ne-generator.
Ukusetshenziswa kwe-AFPMG kunikeza esinye isisombululo emkhakheni wama-generator kagesi noma ngemishini kagesi iyonke. Ukwakhiwa kwawo okwenziwe ngama-disc nezimpawu ezinenzuzo ze-elekthronikhi zibonisa izici eziyinhloko ekukhiqizweni kwamandla kagesi okuhlukile nasezinhlelweni eziphezulu zokushayela zikagesi.
· Ububanzi obusebenzayo be-unomphela Magnet Generator (PMG)
Ububanzi obusebenzayo be-Permanent Magnet Generator (PMG)
Umsebenzi wokwakha nobuchwepheshe wenza i-Permanent Magnet Generators (PMG) iyisinqumo esiphelele sezinhlelo zokusebenza zomoya ezincane zamawashi (i-SWT).
Uhla olusebenzayo lwe-PMG luhlanganisa izidingo zenjini encane yomoya (i-SWT). Kuma-turbines omoya we-1-5KW, angasebenzisa i-stator eyodwa ye-rotor-single ye-AFPMG, kuma-turbines ayi-5KW-50KW, angasebenzisa i-AFPMG ngokwakha ama-single rotor-Double stators.
Isilinganiso samandla ngaphezulu kwe-50KW simbozwe yiRadial Flux Permanent magnet Generator (RFPMG).
QM-AFPMG Ngaphakathi Ukujikeleza QM-AFPMG Ngaphandle Ukujikeleza
imodeli Kulinganiselwe ngo- Okukhiphayo amandla (KW) Kulinganiselwe ngo- ijubane (RPM) Kulinganiselwe ngo- Okukhiphayo voltage Isisindo (Kg) imodeli Kulinganiselwe ngo- Okukhiphayo amandla (KW) Kulinganiselwe ngo- ijubane (RPM) Kulinganiselwe ngo- Okukhiphayo voltage Isisindo (Kg)
AFPMG710 10 250 I-380VAC 145 AFPMG770 15 260 I-380VAC 165
7.5 200 I-380VAC 10 180 220VAC / 380VAC
3 100 220VAC / 380VAC AFPMG700 10 250 I-380VAC 135
AFPMG560 15 400 I-300VAC 135 7.5 200 I-380VAC
10 250 I-380VAC 5 150 220VAC / 380VAC
AFPMG520 3 200 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 70 AFPMG510 3 200 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 65
AFPMG460 2 180 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 52 AFPMG450 2 180 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 48
AFPMG380 2 350 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 34 AFPMG380 2 350 I-112VDC / 220VAC / 380VAC 32
AFPMG330 1 350 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 22 AFPMG320 1 350 I-56VDC / 112VDC / 220VAC 20
AFPMG270 0.5 350 I-28VDC / 56VDC 11 AFPMG260 0.5 350 I-28VDC / 56VDC 11
AFPMG230 0.2 350 I-14VDC / 28VDC 8.5 AFPMG220 0.2 350 I-14VDC / 28VDC 8.5
AFPMG210 0.1 350 I-14VDC / 28VDC 6 AFPMG200 0.1 350 I-14VDC / 28VDC 6
AFPMG165 0.3 850 I-14VDC / 28VDC 4 AFPMG150 0.3 850 I-14VDC / 28VDC 4
Isigaba sohlu lokuhlola
1. Ubukhulu nokubekezelelana
2. Amandla wokukhipha, i-voltage ne-RPM
4. Ukuqala i-torque
5. Okukhipha ucingo (Okubomvu, okumhlophe, okumnyama, okuluhlaza / emhlabeni)
1. Isimo sokusebenza: ngaphansi kokuphakama kwamamitha ayi-2,500 30, -XNUMX ° C kuya ku-+50 ° C
2. Ngaphambi kokufakwa, ukuphendukela ngobunono shaft noma indlu ukuze kuqinisekiswe ukuguquguquka kokushintshana, akukho msindo ongahambeki.
3. Ukukhishwa kwe-AFPMG kuyisigaba sesithathu, ukuphuma kwezintambo ezintathu ngaphambi kokufakwa, sebenzisa i-500MΩ Megger ukuze
hlola ukumelana kokufaka phakathi kocingo oluphumayo necala, akumele kube ngaphansi kuka-5 MΩ
4. Uma i-AFPMG ingumkhiqizi we-rotor yangaphakathi, kwinqubo yokufaka, kufanele iqinisekise ukuthi isikulufa sokukhiya sisendaweni, kubaluleke kakhulu
Iwaranti: iminyaka eyi-2-5